एउटा संघर्षको कथा जसले परिवर्तनमा उथलपुथल ल्यायो | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more एउटा संघर्षको कथा जसले परिवर्तनमा उथलपुथल ल्यायो
एउटा संघर्षको कथा जसले परिवर्तनमा उथलपुथल ल्यायो
बजीर सिह विक
माघ १० गते, २०७४ - १०:४३
गाँउको नाम नै शियाला । पहाडले छेकिएको । पुस, माघ महिनामा हिमपात हुने । हिउदको समयमा गराहरु सेतै देखिने अनि बाटाहरुमा कारिम परेर (पानी जमेर) सिसा जस्तै हुने । लगाउने कपडा नभएर च्यातिएका, ठाँउठाँउमा टालो हालेर लगाउनु पर्ने । रोजगारी नभएर गाँउलेहरु भारतमा ज्याला मजदुरी गर्न जानु पर्ने शियाला गाँउकाे बाध्यता।
मजदुरीका लागि भारत जान नसक्नेले गाँउमा ठूलाबडाकाे हलि बनेर काम गर्नु पर्ने वाध्यता थियो शियाला गाँउका वासिन्दाको । तल्लो र माथिल्ला जातिको भेद अझ भनौं जिमुवाल, मुखियाहरुको राजकाज चलेको ठाँउ । त्यहाँ रजाँइ चल्थ्यो ठूला बडाहरुको । कसैले अाफ्नाे मनमा लागेकाे काम गर्न नहुने, बासीभात तताएर खान नहुने, यदि कसैले खाएको भेटाएमा मुखियाले हदै सम्मको जरीवाना गर्ने परमपरा ।
जरीवानाको नाममा खसी, बाख्रा, रुपैया, पैसा रोग्रा जीमुवाल, मुखियाहरुले दण्ड सजाय भन्दै डाटेर आफनो पोल्टामा पार्थे । ठूलाबडाहरुको अण्डरमा रहेको याे शियाला गाँउमा दिउसो ११- १२ बजे पछि मात्र घाम लाग्थ्यो । मिहनतका धनी जनता दश नङग्रा खियाउनका असाध्यै सिपालु । न दिन, न रात केहि नभनि काममा जाेतिरहने किसानकाे दिनचर्या ।
दलित समुदायका मानिसलाई डोला बोक्ने, ठाँडा(वाँसको लाश वोकेर लैजाने सामाग्री) काट्ने, टेको समाउने, बन्चराे बोकेर दाउरा काट्ने र बाेक्न लगाउने । विवाह , वर्तवन्ध अनि खेत खलिहानमा काममा लगाउने, जुठाभाँडा माझ्न लगाउने । उनिहरूकाे नजरमा याे समुदायका मानिस कमारा, कमारी जस्तै थिए । ठूलावडाको रवाफ, दवदवा र प्रभावमा रहेको शियाला गाँउ । डरै डरमा हुर्किएका गाँउलेको दिनचर्या थियो दविएर बस्नु ।
एक दिन याे शियाला गाँउमा कालिकोट जिल्लाकाे गेला भन्ने ठाँउबाट एक परिवार भागेर आएको रहेछ । डुल्दै जाँदा त्यो भागेको परिवार त्यहि शियाला र मडासैन भन्ने ठाँउमा वास वस्न पुगे छ । त्यहि गाँउमा काम गरेर खाने । विस्तारै जग्गा जमिन किनेर वासिन्दा नै बन्यो त्यो परिवार । मिजासियाे, मेहनती, परिश्रमी र मर्दा पर्दा गाँउवासीलार्इ निकै सहयाेग गर्ने त्याे परिवार गाँउका लागि सहयाेगी भयाे ।
मध्यपश्चिमाञ्चलको दैलेख आठबीस दरा । यहाँ स्वाभावैले परमपरागत रुपमा निकै नै लोक सस्कृति छ । परम्परा गतरुपमा चलिआएका देउडा खेल, माँगल, छैटी, हुड्के नाच, रत्यौली, झाउरे नाच, धामी नाच, श्रमकारी नाच, मारुनी नाचलगाएतका थुप्रै लोक सस्कृतीको धनी ठाँउ । यहाँ पञ्चेवाजा (दमाहा) नाच, लोकप्रिय नाँचहरु हुन । विवाह व्रर्तवन्ध र दशै तिहार जस्ता चार्डपर्वमा रमाईलो गर्ने चलन पहिले देखि नै चलिआएको लोक सस्कृति हुन ।
परम्पराका रुपमा अस्तीत्वमा रहेका यि सस्कृतिकाे संरक्षण भने भएको थिएन । यी नाँच केवल मनोरन्जनका लागि मात्र थिए । राती-राती गीत गाँउने पुरातनवादी चलन थियो । युवा, युवतीहरु विशेष गरी यसमा समाहित थिए । विचारमा परिवर्तन ल्याउने खालका आधार नभएकाे सस्कृतिमा बढी उद्त थियाे । परमपराकै जघेर्ना गर्ने जात्रा पनि यहाँ प्रचुर मात्रामा थिए ।
गाईजात्रा, गल्लौडी, भैनी, भुवो, भैलो, सेरा, विजारे, लाेड्या जस्ता मेला अाैधी चलनमा र चर्चित थिए । ती मेलाहरु केवल रमाईलाका साधन थिए । मोजमस्तीका साधन नै यी जात्रा सावित भएका थिए । केटाले विवाह गर्नु परे ती मेलाबाट जुन केटी मनपर्याे रोजेर लिन पाईने । अर्थात लछार पछार नै चल्थ्यो । यसलाई सरसरती भन्दा महिला हिंसा नै थियो । त्यो हिंसा लगाएतका मानव कलंकका रुपमा रहेका जातिय हिंसा जस्ता कुराहरु त्यो कालिकोटबाट बसाई सरेको परिवारलाई पटक्कै मन परिरहेको थिएन ।
त्याे हिंसा अन्त्यका लागि त्याे परिवारमा परिवर्तनको अग्रगामी सोचले घचघच्याई रहेको थियो । भित्र भित्रै त्यो परिवार मुरमुरी रहेको थियो । सामन्तवादी, जातिभेद र वर्गभेद भएको अर्थात शोषणमा आधारित व्यवस्थामा तमाम कामगरी खाने जनताको चेतना भर्ने राजनैतिक रुपमा सचेत र संगठित गर्ने कुनै पनि संकेत याे ठाँउमा देखिदैन थियो ।
हेपिएका, चेपिएका, थिचिएका र पिल्सीएका समुदायको राज्यमा पँहुच त के सामान्य कापीको पाना समेत छुन नपाउने याे ठाँउकाे वास्तविक्ता देखेर त्यो परिवार त आक्रोसित भैरहेकाे थियो । मानिस एउटै भएपनि तल्लाे र माथिल्लाेकाे भेद । तल्लाे जातिमा गनिएका मानिसले छोएमा पाप लाग्छ भन्ने आध्यात्मवादी विचारले शोषीत–पीडित जनतालाई वैचारिकरूपमा शुन्य पारिएको थियो । तल्लो जात भनेर अपहेलना र घृणा गर्ने, आफुलाई ठुला भन्ने जातिका मानिसलाई छुनै नहुने, छोएमा जात जाने, नर्कमा पर्ने रुढीगत कुराले जरा गाडेको यसठाँउकाे समाजमा फरक ढंगको विचार बोकेको थियो त्यो वसाइ सरेकाे परिवारले ।
तल्ला जातका मानिसले बजाएमा अशुभ हुने भनेर महाराजी नगारा, शंख, तालहरू बजाउन प्रतिबन्ध लगाईएको थियो । दलितहरुले ती बाजा बजाए, महाराजी नगारा हालेमा दण्डित हुनु पर्थ्याे । तिमीहरूले हाम्रा काममा मात्र बजाउन पाँउछौ । तिमीहरुले आफनो काममा शंक फुक्न पाँउदैनौ भनेर गाँउ वस्तीमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।
यदि तल्लो जातका मानिसले वजाए भने मारपीट गर्ने, गरिवका खोपे, ताउला हातपात गरि लिने चलन थियो । वाजा बजाउन स्वीकृति लिनु पर्छ भन्दै गरिवसंग भएको खेतपाखा आफ्नो पोल्टामा पार्थे । वजाई हाले उनीहरुलाई कमारा, कमारी बनाउथे । विस्तारै समाजमा चेतनाको विकास हुदै जाँदा पंचेवाजा र शंख वजाँउदा समाजमा अशुभ भयो भन्दै कुटाकुट गर्ने गर्दथे । यस्ता घटना थुप्रै छन् ।
उहादरणका लागि दैलेख जिल्ला क्षेत्र न. १ मा दलित परिवारका मान्छेले आफनो मानिस मर्दा शंख र दमाहा बजाएका थिए । सामन्त शोषकहरुले उनीहरुलाई जरिवाना तिराएका थिए । धनसम्पतीमात्र होइन मरणासन्न पारेर कुटपीट गरेका थिए । त्यस्तै क्षेत्र न. २ को साविकका आठवीस दरामा जिमुवाली र मुखियाहरुको हालि मुहाली चलेकाे थियो ।
अन्धविश्वासमा जकडिएको गाँउ मध्यको एक हो आठवीस दराको शियाला गाँउ (छेपाडी) । (हाल आठवीस नपा ९ बाट) त्यो गाँउमा ठूलो विद्रोह भएको थियो । विवाहमा दमाहा बजाउदा, बन्दुक पट्काउदा कुटाकुट भएको थियो । धेरै घाईते भएका थिए । जसमा राम्रो भूमिका मने कामीको रहेका थियो । उनले पछि परेका समुदायको नेतृत्वदायि भूमिका खेलेर राष्ट्रिय बाजा दमाहा, ताल बजाउन लगाएर विद्राेहकाे शुरूवात गरेका थिए ।
दलित भनेर हेपिएको समुदायले पंचेवाजा र शंख बजाउन त्यो दिनबाट पायो । संघषको त्यो ठूलो रुप थियो । दैलेख आठवीस दरालगाएतका गाँउहरुमा रात्री संचालन हुने परमपरागत जात्रामा गाई जात्रा, भुवा, भैनी, तिज, नानटापु आदी मेलाहरुमा जनजाती युवा, युवतीले झाउरे नाच्ने, मादल बजाउने, लोकभाका गाँउने र सवैलाई मनोरन्जन दिने गर्दथ्ये । अन्य जातिका मानिसहरु देउडा खेल्ने, कति युवतीले त दुरव्यवहार खेप्नु परेकाे थियाे ।
त्यस्ता कृयाकलापको व्यापक विरोध गरेर सुसस्कृत समाज निर्माण कसरी गर्ने हाेला ? वारम्वार दिमागमा खेलिरहन्थ्याे शिह बहादुर गेलालकाे । उनले कुलतमा लागेका युवाहरुको जम्मातलाई मोटिभेसन गर्न थाले । समाजमा जकडिएर रहेको जातिय कुप्रथा छुवाछुतको अन्त्य, छाउपडी प्रथा अन्य र विकृतिको रुपमा रहेको राती राती गीदगाँउन जाने चलन र राती लाग्ने मेलाको न्यूनिकरण गरेर सुन्दर समाज निर्माण गर्न गेलालले युवाहरुलाई परिवर्तनको बाटोमा हिडाउने सोच बनाए र नेतृत्व लिए ।
गाँउघरकाे काम सकेर युवाकाे ताँति लाग्याे कमाउन भारतकाे कालापहाड तिर । भारतका विभिन्न सहरमा मजदुरी गर्नु नेपालीकाे तिर्थ जस्तै थियाे । गेलाल पनि लागे भारतमा ती मजदुरी गर्न गएका युवाकाे पछि लागेर । समाजको अपहेलनालाई सहन गर्न नसक्ने गेलालले भारतमा आफना समुदायका युवालाई कुलतबाट बचाएर संगठित पार्दै समुह बनाए । समाजमा सक्रिय भूमिका खेल्ने गेलाल अन्यायमा परेका मानिसलाई उद्धारमा तत्काल एक्सन चाल्थ्ये । समाजले पनि उनलाई राम्रै आदर सत्कार गर्दथ्यो ।
समय वित्दै गयाे । घर फर्किने समय पनि नजिकिदै अायाे । गेलालले ती युवालाई जम्मा गरेर छुवाछुत अन्त्यका लागि पहिलो एजेण्डा उठाए । त्यो एजेण्डा थियो प्रतिवन्ध लगाएको शंक बजाउने । भारतको हिमाचल प्रदेशको मनालीमा कुल्लीकाम गर्ने ती दलित समुदायका युवाहरुकाे वैठक बसेर उनिहरुले निर्णय गरे । कि प्रत्यक व्यक्तिबाट २० रुपयाँ उठाएर शंख किन्ने । करिव ३० जना युवाले २० रुपयाका दरले अनिवार्य उठाउने वाँकि इच्छुकले जति सकिन्छ त्यति हाल्लने कुरा गरे । उठाएको रकम जम्मा ६०० भयो ।
त्यसमा सहभागी म पनि हुन्छु भनेर वेरुपाटाका सौरेकामी पनि २० रुपैया दिएर शंख किन्नमा सहभागी भए । ६२० रुपयाँ भयो । वाँकि रुपया शिह बहादुर गेलालले आफैले दिएर जम्मा १४०० भयो । अनि केहि युवालाई भारतको हरिद्धार पठाए । त्यो पैसाले दुईवटा शंख किने । योजनाकार शिह बहादुर गेलालको पहिलाे योजना सफल भयो । गाडिभाडा कमाएर गाँउमा आए । केहि समय पछि गाँउमा दलित परिवारका वृद्ध सौरे कामीको मृत्यु भयो ।
गेलालले शंख बजाउने निर्णय गरे । तर त्यो समुदायले मानेन । जसकाे लागि गेलालले यतिसम्म गरे त्यहि समुदाय नबजाउने तिर गए पछि गेलालकाे रिस उठ्याे । दवावमा रहेको त्यो समुदाय डरायो । यति वेला गेलालले योजना चकनाचुर भएको महशुस गरे । उनले भने मरेका श्यालहरु हो तिम्रो मुक्ति यसरी नै सम्भव छ । नत्र कमारा कमारी, हली, दास, दासी भएर मर भनेर समुदायलाई सम्झाए । केहि युवाले साथ दिए र शंख बजाए । जे समस्या अाँउछ त्यसकाे सवै जिम्मा म लिन्छु भनेर युवालाइ ढाडस दिए ।
पछि शंख फुकियो । उपल्लो जातिकाले मात्र बजाउने शंख बजेको सुनेर सवैको जमघट भयो । कामीको लाशमा शंख बजाउने भनेर व्यापक हिंसात्मक घटना भए । तर दलित समुदायका युवाहरु हट्टाकठ्ठा थिए, उपल्लो जातिका पनि डराए । लाश समेत खोलामा फालिदिने धम्की उपल्लो जातिबाट आयो । गेलालले भने अब लाशलाई खोला फाल्ने भनि हाल्यौ, फाल्ने होईन छोएर मात्रै हेर, तिमीहरुको के के हाल हुन्छ पछि परिणाम भोग्न तयार भएर मात्र गर नत्र भनेर गेलाल तम्सीए ।
झोकी गेललका शव्दबाँण का अगाडि त्यो समुदायका मानिसकाे केहि चलेन । आफ्नै जस्तो मुख लगाएर फर्किए । उपल्लो जातिका केहि परिवर्तन चाहने मानिस पनि त्यहीँ थिए । एक्काइशौं शताव्दीमा हामीले यस्तो गर्न हुदैन भनेर गलत नियती भएकाहरूलाइ सम्झाए । त्यो घटना पछि दलित समुदायले आफनो परमपरामा शंख, दमाहा, ताल बजाउन सक्षम भयो । त्यस पछि गेलालको पहिलाे याेजना साकार भयाे ।
गेलाल अब अर्को याेजनामा लागे । समाजमा परिवर्तन चाहने गेलालको दाेस्राे याेजना थियाे अन्धविश्वासमा रुमलिएको समाजमालाई सर्वपर्थम सास्कृतिक हस्तक्षेप गरेपछि मात्र समाज रुपान्त्रण गर्न सजिलो हनेछ भन्ने याेजना । उनले चारैतिर हेर विचारमा परिपक्क अाफ्नाे समुदायकाे काेहि भेटाएनन् । अनि आफ्नै परिवार अर्थात छोराछोरीबाटै संघर्ष गर्ने योजना बनाए ।
देउसीको दिन देशैभर देउसी खेले पनि ग्रामिण भागमा देउसी खेल्ने थाहा थिएन । गाँउमा त्यहि मौका छोपेर उनले देउसीको तयारी गर्न थाले । छोरा छोरीलाई पात्रकाे रूपमा खेलाउने याेजना वुने । केही युवालाई केटी बनाएर देउसीको तयारी गरे । खेले गाँउमा रमाईलो भयो । तर समाजमा उपद्रो मचाउने हरूले गलत भयो भनेर आलोचना गरे । छाेरा छाेरीसंगै खेल खेलायाे भनेर व्यापक अालाेचना भयाे तर पनि गेलालले त्यो काम छोडेनन् । लागि रहे व्यापक आलोचनाको विचबाट पनि उनि सफल भए ।
दोस्रो खुट्कीलो पनि सफल हुने देखेपछि शिह बहादुर गेलालले अव त्याे शियाला गाँउमा साँस्कृतिक संघ बनाएर जनतामा राजनैतिक चेतनाको विजाराेपण गर्ने याेजना बुनिहाले । त्यहि हेतुले अन्धविश्वासको भूमरिमा परिरहेको समाजमा अब भाषणबाट मात्र होईन कला र संगीतको माध्यमबाट जनजागरण ल्याउने र समाजलार्इ जुरूक्क उठाउने सपना बुने ।
कलाकारको रुपमा छोरा, छोरीलार्इ उभ्याए । त्यसपछि अरुदाजुभाईका छोरा छोरी पनि साथ दिए अनि वर्गविहिन समाजको लक्ष्य वोकेर तिनिहरुलाई मार्गनिर्देश गर्ने व्यक्तिको खाँचाे अाैल्याए र कलाकार टीमकाे मार्गनिर्देका रुपमा निलम र कौशललाइ जिम्मेवारी दिए । निलम र काैशल समाज परिवर्तनका अभियान्ता भएर भरपुर साथ दिए ।
कौशलले पनि कलाकारको रुपमा आफ्ना परिवारका केटाकेटी जम्मा गरे । निलमले पनि आफना परिवारका केटाकेटी जम्मा गरेर रिहल्सल गरे । यसरी समाज रूपान्त्रणमा एउटा उथलपुथल ल्याउने दैलेख जिल्लामा पहिलो पटक सास्कृतिक संघ गठन गरियो । पछि त्याे साँस्कृतिक संघकाे नाम नेपाल क्रान्तिकारी साँस्कृतिक संघ राखेर दैलेखकाे इतिहासमा नै पहिलाे पटक सास्कृतिक हस्तक्षेप गरेर समाज परिवर्तनको राजनैतिक लक्ष्यलार्इ पुरा गरियाे ।
यसमा गेलाल परिवारको महत्वपूर्ण याेगदान छ । त्यो सास्कृतिक संघले दैलेख, सुर्खे, कालिकोट, जुम्ला जिल्लामा गीत संगीतको माध्यमबाट चेतनाको लहर नै ल्यायो । यहि नै दैलेखमा सास्कृतिक हस्तक्षेप इतिहासकै पहिलाे हाे ।
माघ १० गते, २०७४ - १०:४३ मा प्रकाशित